ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး Connections ကို - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homerayhab - မီးရထားသတင်းနှင့်လေလံပွဲပစ္စည်းဝယ်ယူရေး Connections ကို
ဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာရှိသမျှလင့်များနေ့တိုင်း check လုပ်ထား, rayhab, teleferikhab နှင့် karayoluhab ကြှနျုပျတို့၏ website ကို update နေကြသည်နှင့်အတူမွှေးဖြစ်ပါတယ်။ ပွက်ခဒိနျတင်ဒါမှကျူးလွန်ဒေါင်းလုပ်လုပ်အားလုံးတင်ဒါနှင့်ကန်ထရိုက်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်, သင်တို့သည်ငါတို့၏တန်ဖိုးထားနောက်လိုက်မှတာဝန်ခံအခမဲ့ပူဇော်ကြ၏။
Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တင်ဒါ:
Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တင်ဒါ:
Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တင်ဒါ:
Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်:
Gaziantep တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တင်ဒါ:
Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တင်ဒါ:
Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တင်ဒါ:
Erzurum တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တင်ဒါ:
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တင်ဒါ:
Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တင်ဒါ:
Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တင်ဒါ:
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်တင်ဒါ:
အားလုံးမြန်နှုန်းမြင့်ရထား, ရထားလမ်း, မက်ထရို, လမ်းရထား, အလင်းရထားလမ်း, တစ်လိုင်းပြေးရထားနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုနူးညံ့သောကြေညာချက်များနှင့်သင်အခမဲ့အဖြစ်နေ့ရက်တိုင်းကိုယူချင်ကြပါဘူးရလဒ်များ?ဤသည်ကိုအောက်တွင်သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာဖြစ်ပြီးနွေရာသီအဘို့အဝင်အီးမေးလ် link ကို click နှိပ်ပြီး:
Sabiha Gökçenနှင့်Atatürkလေဆိပ်ရထား Link ကို Project မှမီးရထားလိုင်းအစီအစဉ် Ataturk လေဆိပ်လင့်ထားသည်စီစဉ်ထားစွန့်ပစ်ရမည် 02 / 08 / 2013 AYGM Sabiha Gökçenနှင့်Atatürkလေဆိပ်ရထား Link ကို Project မှမီးရထားလမ်း Ataturk လေဆိပ် Connection ကိုအဟောငျးမြားနှငျ့ superstructure ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ "နှင့်ဆက်စပ်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်အလုပ်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ချိတ်ဆက်စီစဉ်ထားစွန့်ပစ်ရမည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, BOT စနစ်မော်ဒယ်အစ္စတန်ဘူလ်3ကျင်းပရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးစီးသောအခါ, လေဆိပ်, Ataturk စီမံကိန်း၏ရလဒ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းချိတ်ဆက်လိုင်း၏4ကီလိုမီတာတက် လာ. အတွေးနှင့်အတူ dispense မှလေဆိပ်ပိတ်ထားခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာပိုင်များ, ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim ၏ဘာသာရပ်အပေါ်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်သူတို့ရဲ့စံချိန်အားဖြင့်ပေးထားပါလိမ့်မည်။ Sabiha Gokcen လေဆိပ်, ရထားလမ်း, တဖန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောကြောင့်ညွှန်ပြသည့်လေ့လာမှုများများအတွက်အာဏာပိုင်များစေပါလိမ့်မည် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဆိပ်ကမ်းသို့ပြန်သွားရန် Yard လမ်းနှင့်ရထား Link ကို Master Plan ကိုလေ့လာအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုAlınacaktır 16 / 08 / 2013 ဆိပ်ကမ်းသို့ပြန်သွားရန် Yard လမ်းနှင့်ရထားဆက်သွယ်ရေးမဟာစီမံကိန်းလေ့လာအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဆိပ်ကမ်းသို့ပြန်သွားရန် Yard လမ်းနှင့်ရထားလမ်း Master Plan ကိုလေ့လာအကြံပေးန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိမ့်မည်, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အတူအလုံအလောက်အတွေ့အကြုံကိုလေလံဆွဲရန် prequalification အဘို့အပလီကေးရှင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။ pre-အရည်အချင်းများသတ်မှတ်ချက်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်အညီလူကြိုက်များအားဖြင့်တွင်ပါရှိသော 4734 ဥပဒေအမှတ်5ကြိမ်မြောက်ဇာတ်လမ်းတွဲပြဌာန်းချက်နှင့်အတူဆန္ဒရှိပါဝင်မှုနှင့်အညီဆုံးဖြတ်ထားသူတွေထဲမှာအရည်အချင်းကို၏ pre-အရည်အချင်းများအကဲဖြတ်ရလဒ်များအတိုစာရင်းကိုအပေါ်လေလံဆွဲရန်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်အချို့လေလံအကြားတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းနံပါတ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အမာစတာအစီအစဉ်လမ်းနှင့်ရထားလမ်းလင့်များ backcourt ဆိပ်ကမ်းအကျင့်ကိုကျင့်အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများကိုဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 08 / 11 / 2013 ဆိပ်ကမ်းများအတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဆိပ်ကမ်းမာစတာအစီအစဉ်ကိုလယ်လမ်းနှင့်ရထားလမ်းလင့်များရှေးနုတျပါလိမ့်မည်အလုပ်လုပ်တယ်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလုပ်လုပ်တယ်မာစတာအစီအစဉ် backcourt လမ်းနှင့်ရထားလမ်းလင့်များဝယ်ယူပါလိမ့်မည်, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အတူအလုံအလောက်အတွေ့အကြုံကိုလေလံဆွဲရန် prequalification အဘို့အပလီကေးရှင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။ pre-အရည်အချင်းများသတ်မှတ်ချက်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်အညီလူကြိုက်များအားဖြင့်တွင်ပါရှိသော 4734 ဥပဒေအမှတ်5ကြိမ်မြောက်ဇာတ်လမ်းတွဲပြဌာန်းချက်နှင့်အတူဆန္ဒရှိပါဝင်မှုနှင့်အညီဆုံးဖြတ်ထားသူတွေထဲမှာအရည်အချင်းကို၏ pre-အရည်အချင်းများအကဲဖြတ်ရလဒ်များအတိုစာရင်းကိုအပေါ်လေလံဆွဲရန်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်အချို့လေလံအကြားတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Anatolia DMU ယာဉ်များဘရိတ်စွဲစေ (TÜVASAŞ) ဝယ်ယူပါလိမ့်မည် 01 / 12 / 2015 Entity အပိုဒ် 2015- 168284 ချုပ်ဝင်အပေါ်လေလံဆွဲသတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. နူးညံ့ပြဿနာများ 1 / 1.1 subject: Anadolu DMU ယာဉ်များTÜVASAŞညွှန်ကြားမှုအထွေထွေဘရိတ်စွဲစေ JCC မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါစာချုပ်ဝင် Entity; က) အမည်: TÜVASAŞအထွေထွေညွှန်ကြားမှုခ) လိပ်စာ: Mithatpasa Mah, အမျိုးသားအချုပ်အခြာအာဏာ CAD ။ ။ အမှတ် 131, 54100 Adapazari / Sakarya / တူရကီဂ) တယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 90 264 275 1660 ဃ) ဖက်စ်နံပါတ်: 90 264 275 1679 င) E-mail ကိုလိပ်စာ: သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ info@tuvasas.com.t: ငါ hyersoy@tuvasas.co နှင့် .com ။ f) Related ယူနစ်: နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်ဒါရိုက်တာ-xnumx.istekli ၏အရစ်ကျနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနနုများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးဌာနခွဲကနေရရှိနိုင်ကြသည်။ နု၏ဘာသာရပ်အပေါ်ပြန်ကြားရေး ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်းစီမံကိန်းန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည်သည်နှင့် OSB လေ့လာရေး Links များ 27 / 08 / 2018 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Project မှန်ဆောင်မှုများအဘို့တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းမီးရထားလိုင်းလက်ခံရရှိပြီး OSB Connections ကို STATE ရထားလမ်းအုပ်ချုပ်ရေးလေ့လာရေး TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး (TCDD) 1 လိမ့်မည်။ ဒေသန္တရဝယ်ယူရေးနှင့် Inventory CONTROL လုပ် SA ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရေးတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်း, Oyak Renault ကမော်တော်ယာဉ်စက်ရုံ, Bursa OSB နှင့်လိုင်း၏အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းနှင့်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများအဘို့ Nilufer OSB ရထားလမ်းလင့်များအိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းန်ဆောင်မှုများအပိုဒ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေ 4734 အမှတ် 19 ဝယ်ယူရန်အညီ ဒါဟာနည်းလမ်းအားဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 382868 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ဘူတာအဆောက်အအုံ ...
Sabiha Gökçenနှင့်Atatürkလေဆိပ်ရထား Link ကို Project မှမီးရထားလိုင်းအစီအစဉ် Ataturk လေဆိပ်လင့်ထားသည်စီစဉ်ထားစွန့်ပစ်ရမည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဆိပ်ကမ်းသို့ပြန်သွားရန် Yard လမ်းနှင့်ရထား Link ကို Master Plan ကိုလေ့လာအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုAlınacaktır
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အမာစတာအစီအစဉ်လမ်းနှင့်ရထားလမ်းလင့်များ backcourt ဆိပ်ကမ်းအကျင့်ကိုကျင့်အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများကိုဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Anatolia DMU ယာဉ်များဘရိတ်စွဲစေ (TÜVASAŞ) ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာအဘိတ်များနှင့်မီးရထား Connections ကိုစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာနှင့်မီးရထား Connections ကိုစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများAlınacaktır
ရှင်ဇိုအာဘေးမှတဆင့်နယူးမီးရထား Link ကိုအတူတူရကီရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာအလွန်အပြုသဘောဆောင်သည့်ဦးတည်ချက်အတွက်ထိခိုက်ပါလိမ့်မည်
Izmir ဂလားပင်လယ်အော် Crossing နှင့်ဆက်သွယ်မှုစီမံကိန်းလေ့လာမှုများနှင့်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုတင်ဒါများအပါအဝင်အဝေးပြေးနှင့်ရထားလမ်းစီမံကိန်းများ၏ရက်စွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့သည်